အဆီစားခြင်းကို ရပ်လိုက်ရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ? - Lifestyle Myanmar
အဆီစားခြင်းကို ရပ်လိုက်ရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ?
အစာစားတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ ဖယ်ထုတ်ပစ်ချင်တဲ့ ပထမဆုံးအရာက အဆီဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အဆီက သင့်ကို ကိုယ်အလေးချိန်တတ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ မှန်ပေမယ့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာသောအဆီလည်း ရှိပါတယ်။ အဆီလုံးဝဖယ်ရှားခြင်းက သင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်စေပြီး သင့်အိပ်မက်မက်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရရှိဖို့ သင့်ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ဖျက်စီးနိုင်ပါတယ်။
၁။ ဆာလောင်နေတယ်လို့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်
အဆီကို ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ အစာစားပြီးတာတောင်မှ ဗိုက်မပြည့်တာကို သတိပြုမိပါမယ်။ Dietary အဆီက ကျွန်မတို့ အစားအသောက်မှာ လိုအပ်တဲ့ မရှိမဖြစ် အာဟာရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သင့်မှတ်ဉာဏ်က ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်
အဆီလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ရင် ပုံမှန်အတိုင်း နိုးနိုးကြားကြားမရှိကြောင်း သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့အဆီတွေက ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကို တိုးတတ်စေပါတယ်၊ သံလွင်ဆီ၊ အခွံမာသီးနဲ့ ငါးကဲ့သို့သော ကျန်းမာတဲ့အဆီတွေ ပါဝင်တဲ့ အစားအသောက်တွေက သင့်မှတ်ဉာဏ်ကို တိုးပွားစေကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်၊။ အဆီလုံလောက်အောင် စားခြင်းကလည်း စိတ်ဖောက်ပြန်မှု နိမ့်ကျခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
၃။ သင့်နှလုံးကို အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ပါတယ်
နှလုံးအတွက် ကျန်းမာတဲ့ အဆီတွေကို စားသုံးခြင်းက အကျိုးများစွာရှိပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အဆီများစွာ ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေက နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သံလွင်ဆီဇွန်းတစ်ဝက်ကျော်စားသုံးသူတွေဟာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ ၁၅% အောက်သာ ရှိပါတယ်။
သင်ဟာ အဆီနည်းသော အစားအစာ( low-fat diet) နောက်လိုက်တဲ့အခါ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကို အဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းမှ ထိန်းထားပေးပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဗာဒံဆီကဲ့သို့သော ကျန်းမာတဲ့အဆီအချို့က သင့်ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုကို တိုးတတ်စေနိုင်ပါတယ်။
၅။ ကြွက်သားတည်ဆောက်ဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်
ကောင်းတဲ့အဆီတွေ စားခြင်းနဲ့ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက သင့်အား ကြွက်သားတည်ဆောက်ဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အဆီက သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ပရိုတင်းဓါတ်တိုးခြင်းကို တိုးပွားစေပါတယ်။ အဆီက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်အား မြန်မြန် recover လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
၆။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းလာနိုင်ပါတယ်
ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေက ကိုယ်ခံအားစနစ် ကာကွယ်ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အဆီနဲ့တွဲစားတဲ့အခါ ဗီတာမင်တွေကို ကောင်းကောင်းပိုစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အစားအသောက်ကနေ ကောင်းတဲ့အဆီတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အား ဗီတာမင် အလုံအလောက်မရစေဖို့ တားဆီးထားနိုင်ပါတယ်။